ओवन मा Pilaf
हरेक गृहिणी पकाउन सक्षम हुनुपर्छ भन्ने व्यञ्जन एक pilaf छ। एक cauldron, utyatnitsu वा सिर्फ एक हत्येदार बरतन मा तयार। परंपरागत, pilaf खाना पकाउने प्रयोग पाठो। तर यो चिकन, मासु वा पोर्क एक स्वादिष्ट पकवान बाहिर जान्छ रूपमा। ओवन मा pilaf कसरी खाना पकाउनु? यो यस स्वादिष्ट पकवान को4नुस्खा प्रतिनिधित्व जो हाम्रो लेखमा छ।
ओवन मा Pilaf (पाठो)
सामाग्री: मटन को एक पाउन्ड, चामल को 330 ग्राम, टमाटर को पेस्ट 55 ग्राम, दुई गाजर, प्याज, शोरबा, मरिच को 650 एमएल, मसला (स्वाद), तेजपात, साग, नुन, 65 ग्राम बोसो।
नुन र मरिच संग सबै पक्षलाई घन मा मासु काट्न र त्यसपछि एक कराइ मा तलना, पहिले यसलाई मा बोसो ढल्छ। एक हत्येदार बरतन मा मासु डाल शोरबा खन्याउन। सूक्ष्मता एक पैन मा प्याज र गाजर र भुट्नु काट्नु र हत्येदार बरतन मा राखे। नुन, टमाटर को पेस्ट र मसाले थप्नुहोस्। फोडा गर्न ल्याउन।
मासु संग चामल संयोजन, बाक्लो सम्म पनि एक तेजपात राख्नु हलचल र simmer। त्यसपछि एक घण्टा ओवन मा राखे। पकवान तयार हुँदा, साग sprigs यसलाई सजाउनु।
ओवन मा Pilaf (पोर्क)
सामाग्री: पोर्क को 450 ग्राम, छाँट्दछ 10 टुक्रा, चामल को दुई कप, तीन प्याज, गाजर, दुई, चामल को दुई कप, 20 G pilaf लागि मसला प्रति पानी लीटर, वनस्पति तेल, नुन।
बारेमा सेन्टिमिटरले एक उचाइ गर्न utyatnitsu वनस्पति तेल मा पोख्नुहोस् र आगो राखे। पोर्क धुने, कट, stems सानो टुक्रा मा कटौती र utyatnitsu मा राखे। आफ्नै रस, मासु बाट छुट्टयाएर छ जसमा स्ट्यु। त्यसपछि आधा छल्ले मा कटौती र मासु संग प्याज।5मिनेट पछि सूक्ष्मता कटा गाजर राखे। को छाँट्दछ काट्नु र utyatnitsu थप्न। मसला, नुन छर्कनु र राम्ररी मिश्रण। utyatnitsu पानी खन्याउन र जोश यसलाई ल्याउन। चित्रा अवशोषित, पानी बारे एक सेन्टिमिटरले भन्दा ठूलो हुनुपर्छ। फेरि एक फोडा गर्न ल्याउन र एक घण्टा ओवन मा राखे। पकवान तयार छ।
ओवन मा Pilaf (चिकन)
सामाग्री: एक पाउन्ड चिकन, चामल, प्याज, नुन को 350 ग्राम, लसुन को2लौंग, वनस्पति तेल,2गाजर को 60 G।
प्याज छल्ले काट्नु। Grater को गाजर अंगीठी। भुट्नु प्याज तेल (3 मिनेट), गाजर थप्नुहोस्।4मिनेट पछि, तपाईं अघि तपाईं टुक्रा यसलाई कटौती गर्न आवश्यक जो चिकन, थप्नु पर्छ। तरकारी (लगभग 15 मिनेट) एउटा सानो आगोमा संग भुट्नु fillets।
एक cauldron वा गहिरो कराइ मा सबै राख्नु र कटा लसुन थप्न slotted चम्चा। चामल धुन, यो माथि, चिल्लो देखि खन्याउन र यो चित्र2सेमी ढाकिएको भनेर, पानी संग भर्नुहोस्। 45 मिनेट लागि ओवन राख्नुहोस्।
ओवन मा Pilaf (बीफ)
सामाग्री: बीफ को 660 ग्राम, 600 ग्राम चामल खान,3प्याज, peppercorns, मक्खन को 50 ग्राम, लसुन टाउको, वनस्पति तेल, बे3छोड्छ, pilaf लागि 4priprava को गाजर पाउन्ड।
सानो टुक्रा मा अनाज भर मासु कट (सेन्टिमिटरले बारेमा मोटाइ) र तिनीहरूलाई घृणा उत्पन्न। पातलो छल्ले, प्याज काट्न कसा भयो गाजर RUB।
केतली गर्मी र3सेन्टीमिटरको उचाइ। तेल तातो हुन्छ जब, सुनको सम्म बीफ र भुट्नु राख्नका लागि तरकारी तेल खन्याउन। , पानी को आधा कप थप्न केतली ढक्कन कवर र कम गर्मी मा एक आधा घण्टा simmer। को cauldron मा पानी वाफ बन्नु गर्न ढक्कन हटाउन, र यो गर्मी देखि हटाउन। पैन गर्मी, सूर्यमुखी तेल खन्याउन र सुनको खैरो सम्म प्याज तलना। शीर्ष मा cauldron राखेँ। एउटै पैन मा त प्याज को शीर्ष मा राखिएको छ जो गाजर, तलना।
राम्ररी भात धुन, भविष्यमा pilaf अन्य घटक संग मिश्रण बिना cauldron, चिल्लो चम्चा मा भर्नुहोस्। लसुन लौंग समान रूप चामल राख्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै एक केतली उम्लिरहेको पानी, लगभग आधा सेन्टिमिटरले नेभाराको कवर गर्नुपर्छ, जो मा खन्याउन।
नुन संग Risotto र pilaf लागि peppercorns, बे पात र मसला थप्न। मध्यम गर्मी, खोल मा, तरल लगभग पूर्ण वाफ बन्नु छ सम्म पकाउन। सम्पूर्ण सतह माथि समान रूप मक्खन को टुक्रा बाहिर फैलियो।
अर्डर एक स्वादिष्ट पकवान प्राप्त गर्न, तपाईं ओवन मा pilaf सामना गर्न आवश्यक छ। नुस्खा चावल crumbly छ, जो पछि 10 मिनेट, को लागि यस मा प्रदान। त्यसपछि राख्नु pilaf पत्रहरु मिश्रण बिना, एक ठूलो पकवान मा साबित छ, र अर्को5मिनेट लागि ओवन मा ठाँउ हो।
चकलेट मा Marshmallows - स्वादिष्ट र स्वस्थ!
को mycelium के छ: सूप नुस्खा
मासु संग multivarka आलु कसरी खाना पकाउनु: चरण नुस्खा द्वारा एक कदम
कसरी ओवन मा आलु Bake गर्न: चरण नुस्खा द्वारा एक कदम
म खाना पकाउन अघि खुली को eggplants सफा गर्नुपर्छ? उपयोगी आशय
लेखक को हुनुहुन्छ? "विवाह Bal'zaminova"
साइन Abalaksky को पवित्र गुम्बा: इतिहास र फोटो
पीसीटी (बन्दूक) - विशेषताहरु। Pkt ट्यांक मेशिन गन
Ussuri खाडी कहाँ छ?
Androgens - यो के हो? शरीर मा आफ्नो सबै प्रभाव
Mari बीच3* (क्रेते / ग्रीस) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
दबाइ 'Retinol एसीटेट'। निर्देशन
सपना व्याख्या: एक के सपना बगैचा
फोक्सो क्यान्सर: पहिलो लक्षण। सम्झना कसरी होइन?
पुरातन पवित्र चिन्हहरू के भन्छन्? रून ओडिल - अर्थ र भक्ति
चेरी इंडिस - नयाँ कॉम्पैक्ट क्रसरमा मालिकको प्रतिक्रिया